MANCHESTERပြီ ၁၂ ရက်မှ စတင်၍ သင်သွားရန်လိုအပ်သည့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၏ပြင်ပအရက်ဆိုင်နှင့်ဘီယာဥယျာဉ် ၂၀ - သတင်း
Manchesterပြီ ၁၂ ရက်မှ စတင်၍ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၏ပြင်ပအရက်ဆိုင်နှင့်ဘီယာဥယျာဉ် ၂၀ ကိုသင်ကြည့်ရှုရန်လိုသည်
Boris ၏ lockdown ထဲကလမ်းပြမြေပုံ 12 ရက်နေ့တွင်ဆိုလိုသည်thပြီလကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့တစ် Foster ရဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ထဲကမဟုတ်သောတစ်ပိုင့်ပေါ်မှာငါတို့လက်ကိုရနိုင်သည်။
Squirrel's and Friendship သည် Manc ကျောင်းသားအကြိုက်ဆုံးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းအသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။
ဤသည် The Tab မန်ချက်စတာ၏ထိပ်တန်းအရက်ဆိုင်များ, အရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များကိုသင် Post-lockdown သောက်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသူအပေါငျးတို့ pornstar martinis အဘို့အစာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်အကောင်းဆုံး (နှင့်သင်နှင့်အတူလိုက်ရန်သိသိသာသာမုန့်ညက်မလိုအပ်!) ဖြစ်ပါသည် ။
၁။ Freight ကျွန်းသို့ထွက်ပြေးပါ
သိုလှောင်ရုံဟောင်းတွင်တည်ဆောက်ထားသည် Freight ကျွန်းသို့ထွက်ပြေးပါ ဒီနွေရာသီမှာမန်ချက်စတာရဲ့အကြီးမားဆုံးဟော့စပေါ့တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ လူမှုရေးအရဝေးကွာခြင်းကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားသောဒီဇိုင်းဖြင့်သူတို့၏ပြင်ပandရိယာနှင့်စားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်သည်ကော့တေး၊ ယာဉ်ဘီယာများနှင့်လမ်းပေါ်မှအစားအစာရောင်းချသူများအတွက်တစ်ပတ်လျှင်ခုနစ်ရက်ဖွင့်သည်။ မနက်စာမှသည်ဘာဂါအထိဖြစ်သည်။ ဇယားများသည်လျင်မြန်စွာသွားနေပါသည် အခုစာအုပ်ပါ ။
နွေရာသီအတွက်နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲကို ON ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏Aprilပြီလနှင့်မေလအစီအစဉ်များသည်ယခုအချိန်တွင်အသက်ရှင်နေပြီး၊ သင်၏လည်ပတ်မှုတွင်မည်သူကစားနေသည်ကိုရှာဖွေပါ။ https://t.co/Z4fAV3D09g pic.twitter.com/CxhLgddU3z
- Freight ကျွန်းသို့ပြေး (@freightisland) မတ်လ 5, 2021
2. အရူး Pedro ရဲ့
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၏ဂန္ထဝင်ဂန္ထဝင်ဂန္ထဝင်ဂန္ထဝင်ဂန္ထဝင်ဂန္ထဝင်ဂန္ထဝင်သည်ဂန္တ ၀ င်ကစားသမားအားလုံးအတွက်ပြင်ပကုန်းပြင်မြင့်နှစ်ခု (မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်နှင့်နောက်တစ်ခုမှာ Bridge Street) တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားသည် အရူး Pedro ရဲ့ ပီဇာမှအေးခဲနေသောမာဂျီရတီစ်များအထိအခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။ Bookings အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာဖြင့်သွားနေသော်လည်းနေ့စဉ်ကိုးနာရီမတိုင်မီနက်ရှိုင်းသောပီဇာမနက်လည်စာအတွက်အစက်အပြောက်များရှိနေသေးသည်။
ပီဇာပျော်ရွှင်မှုအတွက်လင့်ခ်ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်နာပါ… https://t.co/7NdkNn715B pic.twitter.com/xNMOdOKpqH
- Crazy Pedro (@CrazyPedros) မတ်လ 14, 2021
လူတိုင်းအကြိုက်ဆုံးသော pop-up သည်နေ့စဉ် ၁၂ နာရီမှနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာ၊ သောက်စရာနှင့်လက်လီရောင်းဝယ်မှုများအတွက်ပြန်လည်ကျောထောက်နောက်ခံဖြစ်သည်th။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှအစားအစာများနှင့်ပိုအရေးကြီးတာကပေါင် ၁၀ ကော့ကေးလ်အတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ၂ ခု၊ Hatch ယခုဖွင့်သည် ဘွတ်ကင် သင့်ရဲ့စားပွဲကို ASAP နဲ့လုံခြုံအောင်ထားပါ။
Oxford တက္ကသိုလ်သည် Aztec အင်ပါယာထက်အသက်ကြီးသည်
ယခုမှခြောက်ပတ် ... နွေ ဦး ရာသီရောက်နေပြီ။ မင်းဟာခြံဝင်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့ပိုစ့်တစ်လုံးနဲ့ထိုင်နေတယ်၊
သင်မတွေ့ဖူးသောအခြားအိမ်ထောင်စုတစ်ခုမှသူငယ်ချင်းများနှင့်သင်ထိုင်နေသည်၊ ၁၀ နာရီမပြည့်မှီညမထွက်ရအမိန့်ကိုမရလိုက်သည်။ Hatch ပြန် babyyyy ဖြစ်ပါတယ်။ pic.twitter.com/Jdr70Q2Xz9
- Hatch (@Hatch_MCR) မတ်လ 1, 2021
မိတ်ဆက်ခြင်းမလိုအပ်ပါ။ ၂၅၆ တစ် ဦး Fallowfield ဂန္ဖြစ်ပြီးသူတို့အဘို့ယခုဖွင့်ပါတယ် ဘွတ်ကင် ။ တစ်နေ့တာသောက်စရာ (သို့) မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကျောင်းသားများအတွက်ညနေခင်း (သင်£ 1 ရိုက်ချက်များကိုကြည့်ခြင်း) အတွက်အကောင်းဆုံးသောဘီယာဥယျာဉ်တော်သို့ပြန်ရန်မစောင့်နိုင်တော့ပါ။ ကျောင်းဝင်းရှိအခြားကျောင်းသားများနှင့်အတူပါ။
Ramona သော့ခတ်ထားသည့်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလစ်နှင့်ကောက်ယူသည့်ပီဇာပြင်ဆင်မှုကိုပေးခဲ့ပြီးသူတို့၏ NQ အခြေစိုက်စခန်း၌ဘီယာဥယျာဉ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်ကြေငြာခဲ့သည်။ မီးရှို့မီးများ၊ DJ သမားများနှင့်မာဂရီးတာဘားတို့ဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြင့် Ramona သည် ၁၄ နှစ်တွင်နေရာယူရမည်th။ Bookings အခုအသက်ရှင်နေပြီ၊ သင်ပီဇာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာအရိပ်အမြွက်လိုလျှင်သူတို့၏ site သည်နေ့၌ပျက်သွားသည်!
Detroit ပီဇာဟုတ် Ramona အတွက်သင့်လက်ကိုတင်ပါ pic.twitter.com/fbvTNGGMkm
- Maya Black (@mayaablack) ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2021
၆ ။ Grub Food Fair
အစိမ်းရောင်ရပ်ကွက်သို့ပြောင်းရွှေ့, GRUB လမ်းပေါ်အစာပြပွဲ 12 ရက်နေ့တွင်၎င်း၏ဘီယာဥယျာဉ်ဖွင့်လှစ်နေသည်thလမ်းလျှောက် -In များအတွက်ပြီလနှင့် ဘွတ်ကင် ။ သငျသညျမန်ချက်စတာရဲ့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားနွေ ဦး ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းကနေခိုလှုံပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကဇယားအပြည့်အဝဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်, သူတို့သည်အပတ်တိုင်းအစားအစာနှင့်ကော့တေးအပေါ်အပေးအယူများဝန်ကမ်းလှမ်းပါတယ်။
အကယ်၍ လူကြိုက်များသောရက်စွဲကိုသင်ရွေးချယ်ပါကဇယားတစ်ခုကိုမပေးမီအခြားဘွတ်ကင်များကိုအတည်ပြုရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အချိန်တိုတောင်းနိုင်သည်။ pic.twitter.com/4zrwZCC6y5
- GRUB (@GRUBMCR) မတ်လ 4, 2021
အဆိုပါ Oast အိမ် ဝင်းဝင်းသည်မန်ချက်စတာ၏အကျော်ကြားဆုံးအပြင်ဘက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘီယာနှင့် Hanging Kebabs တို့၏ကျော်ကြားမှုဖြစ်သည်။ အားလုံးနွေရာသီမီနူးအသစ်သွားရန်အဆင် ဘွတ်ကင် နေရာများသည်လျင်မြန်စွာသွားနေသော်လည်းသင်၏ကော့တေးပြင်ဆင်ရန်အတွက်လမ်းများစွာရှိသည်။
Credit: Jack Jolly
ဒီအထင်ကရ Castlefield ဘားနှင့်ကင်ယခုနှစ်ပေါင်း 30 အကြိုက်ဆုံးနွေရာသီအစက်အပြောက်ဖြစ်ခဲ့သည် မင်းညီမင်းသား 92 12 ရက်နေ့တွင်၎င်း၏ပြင်ပရေပြင်ကြမ်းပြင်ဖွင့်လှစ်နေသည်th။ ဖုံးအုပ်ထားသည့်စားပွဲများဖြစ်နိုင်သည် ကြိုတင်ဘွတ်ကင် ယခုအခါလမ်းလျှောက်နိုင်သည့်ကားများနှင့်လည်းနေ့စဉ်ရရှိနိုင် (မန်ချက်စတာရာသီဥတုခွင့်ပြုချက်…) ။
Spinningfields ၏ဗဟိုချက်တွင်ထားပါ။ မြက်ကလပ် နှင့်၎င်း၏အပြင်ဘက်အာကာသတိုးမြှင့်သည် ဘွတ်ကင် ယခုသူတို့၏မြက်ခင်းအိမ်များ၊ သီးတောင့်များနှင့်လှေကားထစ်များကိုရရှိနိုင်သည်။ မန်ချက်စတာ၏အကောင်းဆုံးကော့တေးအချို့နှင့်ကိုက်ညီရန်လေထုနှင့်အတူသင်ကလက်လွတ်ချင်ကြဘူး။
- The Lawn Club Manchester (@LawnClubMCR) ဇွန်လ 16, 2020
1o ။ ဂလားပင်လယ်အော်မြင်း Tavern
ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်အရက်ဆိုင်သည် ၂၁ တွင်ခိုင်မြဲစွာသတ်မှတ်ထားသည်stရာစုနှစ်, ဒီမြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်အစက်အပြောက် Post-lockdown စာရင်းတွင်မြင့်မားသည်။ သောမတ်စ်လမ်းယခုယာဉ်များကိုပိတ်ထားနှင့်အတူ ဂလားပင်လယ်အော်မြင်း Tavern နှင့်အတူကျောက်ခင်းရှေ့တွင်အပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါတယ် ဘွတ်ကင် ယခုရရှိနိုင်
သောမတ်စ်လမ်း 'နေ' တွင်သင်တို့အားလုံးအချိုရည်အနည်းငယ်ပျော်မွေ့ရန်အတွက်ငါတို့အတွက်ပြင်ပareaရိယာအနည်းငယ်ရှိသည်။
- The Bay Horse Tavern (@BayHorseTavern) ဇူလိုင်လ 8, 2020
11. 20 ပုံပြင်များ
၂၀ ပုံပြင် ခေါင်မိုးပေါ်ရှိကျန်ကြွင်းသောအရပ်သည်မန်ချက်စတာ၏ ၃၆၀ ဒီဂရီကြည့်ရှု့မှုကြောင့်မြို့အနှံ့ကျော်ကြားသည်။ မိန်းကလေးများအတွက်ညဘက်တွင်ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခု၊ terr ည့်သည်တော်စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသည် ဘွတ်ကင် 12 ကနေအစားအစာဘို့thjustပြီလ၊ သင်သောက်စရာကောင်းသည်ဆိုပါစို့။
အိုးမန်ချက်စတာ #ILoveMcr pic.twitter.com/0mtxlqNrTy
- ၂၀ ပုံပြင်မန်ချက်စတာ (@ 20StoriesMCR) မတ်လ 22, 2021
Castlefield ရှိတူးမြောင်းကိုကျော်။ ဆိပ်ခံတံတား သင့်ရဲ့ဂန္တ ၀ င်ဗြိတိသျှအရက်ဆိုင်နှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအစားအစာများနှင့်ဘဏ်အပေါ်တွင်ကြီးမားသောပွင့်လင်းသောလှေကားထစ်များရှိသည်။ နေထွက်လာတဲ့အခါဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကပိုင့်ပိုင့်အတွက်နေရာဖြစ်တယ်။ စာအုပ် ဒီမှာ ။
ပထမ ဦး ဆုံးမှာမှာ sunshiiiiinne အတွက်စားပွဲအဘို့အဝတ်ပြုကြလော့ @wharfpub - ယနေ့ကောင်းမွန်သော (ish) ရာသီဥတုအတွက်သင့်တော်သောနေရာဖြစ်သည် pic.twitter.com/Pam6l7Ql9H
- မှန်ကန်သောမန်ချက်စတာ (@ProperMCR) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၇ ရက်
13. Brickhouse လူမှုရေး
ကျောင်းသားတစ် ဦး အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သော Brickhouse Social သည်ဘီယာနှင့်ဘာဂါများအတွက်နယူး Wakefield လမ်းသို့လမ်းဖွင့်နေသည် 12 ကနေ။ ထိုသူတို့ကလက်ရှိအပေါ် giveaway လုပ်နေပါတယ် သူတို့ရဲ့ Instagram ကို £ 100 bar tab ကိုအနိုင်ရ - သင်ဘာကိုဆုံးရှုံးရသနည်း
14. ရေငုပ်ဘား & ကင်
မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ငုပ် ၎င်း၏တတ်နိုင်သောသောက်စရာများနှင့် DJ ရှည်ညဥ့်ရှည်လျားသောအစုံကျော်ကြားသည်။ ၎င်း၏terrပြီလတွင်မန်ချက်စတာနှင့်နွေရာသီ / နွေရာသီကော့တေးတစ်ခုအနေနှင့်အရေးကြီးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိထားကြပြီး၎င်း၏လှေကားထစ်များကိုအပြည့်အဝဖုံးအုပ်ထားသည်။ မီနူး အကျင့်ကိုကျင့်အတွက် - ကျနော်တို့လိုင်းအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ Dive Bar & Grill မှာဖွင့်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ
walk-in ရရှိနိုင်နှင့်အတူ 5pm ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်! pic.twitter.com/MNsZ2ak7u5
- Dive Bar နှင့်ကင် (@divebargrill) အောက်တိုဘာလ 30, 2020
အခြေခံအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ takeaway ပီဇာအပေါ် lockdown အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပြီးမှ, ငါတို့ကအရမ်းပျော်ရွှင်ပါတယ် ရူဒီရဲ့ ဖြစ်ကြသည် ပြန်ဖွင့် Ancoats နဲ့ Peter Street မှာသူတို့ရဲ့ပီဇာဆိုင်တွေ။ သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အီတလီပီဇာ, ဖြောင့်နေပယ်လ်ကနေ, ကောင်းကင်နှင့်ဖြစ်ကြပြီးကျိန်းသေအပြစ်ရှိတဲ့ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုရဲ့ရိုက်တယ်။
Mass အကြီးအကျယ် Peter Street ရှိကျွန်ုပ်တို့၏သစ်ခုတ်မှုများကိုစစ်ဆေးရန်ဆင်းလာသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သငျသညျမသိခဲ့ပါလျှင် ... ငါတို့သည်သစ်သားပစ်ခတ်မှု Neapolitan အဘိဓါန်ပီဇာများအတွက်ဖွင့်လှစ်နေ! #pizzaeveryday #pizzastreet #rudyspizza pic.twitter.com/kd8r1YCX0l
- Rudy ၏ Neapolitan Neapolitan Pizza (@wearerudyspizza) ပြီလ 3, 2018
၁၆။ ရုက္ခဗေဒပညာရှင် MediaCityUK
MediaCityUK ၏ဗဟိုတွင်သတ်မှတ်ထားသော 'အစားအစာနှင့်သောက်စရာ၏လျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်' ရုက္ခဗေဒပညာရှင် များအတွက်၎င်း၏ကျန်ကြွင်းသောအရာဖွင့်လှစ်နေသည် ဘွတ်ကင် walkပြီ ၁၅ ရက်မှ စတင်၍ လမ်းလျှောက်ခြင်း။ kebabs မှသည်အဆုံးမဲ့နေ့လည်စာသိုသို့ Salford Quays ၏လှပသောအမြင်များနှင့်အတူရုက္ခဗေဒပညာရှင်အားလုံးရှိသည်။
ပေတရုလမ်းအလယ်၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဘားသည်မန်ချက်စတာရှိအထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးဘီယာကြမ်းခင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်လုံးတွင်အနက်ရှိုင်းဆုံးနေ့လည်စာနှင့်ကော့တေးလ်များဖြင့်၊ ဘွတ်ကင် ယခုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ!
စကားလုံးများပိုလိုအပ်သည်။ # မန်ချက်စတာ #manchesterlockdown pic.twitter.com/totkh8tIRH
- မဖြစ်နိုင်ချေသောမန်ချက်စတာ (@IMPOSSIBLE_Mcr) အောက်တိုဘာ 20, 2020
Cutting Room Square တွင်လှေကားထစ်များကိုဖွင့်ပေးခြင်း၊ အထီး ကျွန်တော်တို့ကိုအံ့သြဖွယ်ကော့တေးနှင့်ရိုးရာဗီယက်နမ်အစားအစာများကိုလှည့်ကွက်ဖြင့်ကျွေးမွေးလိမ့်မည် - သူတို့ကဗီယက်နမ်ကင်ညစာတောင်ရပြီ။ ဤနေရာသည်ညမှထွက်ပြီးစနေနေ့တိုင်းသင်ရရှိသော Chesters မှများစွာလိုအပ်သောအပြောင်းအလဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သွားပါ စာအုပ် ယခု…
19. Volta အားဖြင့်ခိုလှုံ
The ခိုလှုံရာသည်၎င်း၏ ing ည့်ခန်းကိုအပြင်သို့ယူဆောင်လာပြီးလာမည့်လတွင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်လျှို့ဝှက်အက်ဒွပ်ianရင်ပြင်ကိုဖွင့်နေသည်။ ကော့တေးများသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ကာသူတို့၏တနင်္ဂနွေကင်တွင်သေရမည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ကျောင်းသားချေးငွေကိုတိုးချဲ့နိုင်လျှင်ကျိန်းသေကျိုးနပ်ပါသည်။ အလည်အပတ်ခရီး ။
နွေ ဦး ရာသီသည်လေထဲတွင်ရှိနေပြီး’sပြီ ၁၂ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လှပသောအပြာရောင်ကောင်းကင်ပြာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထမင်းစားခန်းကိုအိမ်ပြင်သို့ယူဆောင်လာရန် ပို၍ ပင်စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။
သင်စားပွဲတစ်ခုကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းမရှိသေးပါကစားပွဲတစ်ခုအတွက်စားသောက်စရာနေရာရှိနေသေးသည်။ ဤနေရာတွင်သာ ဦး တည်သွားပါ။ https://t.co/AgQzc4RPNp pic.twitter.com/cuVPh6ZvqK
- ခိုလှုံရာ (@TheRefugeMcr) မတ်လ 16, 2021
20. သော့ခ 91
သော့ခတ် 91 သောကြာနေ့ (၁၆) ရက်တွင်အချိုရည်အတွက် Tunnel ၌ Tavern ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်သည်thကျနော်တို့ကသူတို့ Instagram ကိုနောက်ယောင်ခံလိုက်ပြီးပါပြီ ဗိုလ်မှူး ကော့တေးမနာလိုမှု, ဒါကြောင့်ငါတို့ပြင်ဆင်ချက်များအတွက် Deansgate မှ ဦး တည်လိမ့်မည် မီးခိုး ။
မကြာမီ v လာမည့်ကြေငြာချက်။
ငါတို့အကြောင်းကိုမင်းတို့မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့က al al fresco အချိုရည်အတွက်စိတ်လေနေတယ်။ #taverninthetunnel #roadmaptodrunkdom # မန်ချက်စတာ #spring pic.twitter.com/08TOrkKAQV
- Lock91Mcr (@ Lock91Mcr) ဖေဖော်ဝါရီလ 22, 2021
တူသောကျောင်းသားတစ် ဦး ဝန် ရင်ပြင် နှင့် Friendship Inn အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်နှင့်ဂေးကျေးရွာများရှိအခြားအရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များကဲ့သို့လမ်းလျှောက်ခြင်းအတွက်သာဖွင့်လှစ်နေကြသည်။ သငျသညျ 12 ဘို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအတွက်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်မရနိုင်ပါလျှင်ဒါကြောင့်ထိတ်လန့်ကြဘူး - ပတ်ပတ်လည်သွားကြဖို့မန်ချက်စတာအများကြီးရှိပါတယ်။
•ဓာတ်ပုံများမှာ - Kill ဘီလ်ဆန္ဒပြမှုများသည်မန်ချက်စတာတွင်သူတို့၏ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်
Carole Baskin မှသည်နက်နက် pudding သို့ - Nancy Rothwell ထက်တရားဝင်လူသိများသောအရာ ၁၀ ခု
•သော့ခတ်ဓာတ်လှေကားပြီးနောက်သင်မန်ချက်စတာရဲ့ငါး -a- ခြမ်းလိခ်မှာကိုဖြတ်ပြီးပါလိမ့်မယ်ကိုးသင်း